Author: Yozshumi Keshicage
Shacbiga Jamhuuriyadda Somaliland waxa uu awooddaas iyo karaamadaas sida ku cad Dastuurka u igmaday dawlad ku dhisnaan doonta kuna dhaqmi doonta Dastuurka. Fadlan ddastuurka qayb qaado hergelinta mashruuca isku wax u qabso ee lagu dhisayo cusbitaalka degaaanka xidda.
Waxa Madaxweynaha iyo Ku-xigeenka Madaxweynaha Iagu dooranayaa qaabka doorashada guud oo toos ah; isla markaana qarsoodi ah iyaga oo isku lammaan. Jamhuuriyadda Somaliland waxay dib u celin kartaa dambule ama eedaysane dalkiisa ka soo cararay, haddii uu jiro heshiis dhex maray Dastyurka Somaliland iyo dalka weydiistay celintiisa.
Somali New Policy adicionou 3 novas fotos. Ballanteennu waa horumar iyo hor u socod. Waxa waajib ah inuu oggolaansho Golaha Wakiilada ka helo qof kasta oo loo magacaabo Wasiir, Wasiir-ku-xigeen, iyo Madaxda Hay’adaha Dawladda, iyadoo la raacayo Dastuurka. Nidaamka siyaasadeed dasturuka Jamhuuriyadda Somaliland waxa saldhig u ah nabad, talo-wadaag, dimuqraadiyad iyo hannaanka xisbiyada badan.
Mashruuc-sharci kasta aan ahayn kuwa Maaliyadda. Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay dhawraysaa heshiisyadii ay Dawladdii hore 1o odhan jiray Cusib la gashay shirkad ama dawlad shisheeye, haddii aanu ka hor imanayn danta iyo maslaxadda Jamhuuriyada Soomaaliand.
Cashuuraha Takaaliifta iyo Ribada. Golaha Wakiiladu waa xubno ka wakil ah dadweynaha; waana Qaybta laad ee Xeer-dejinta dalka, ansixinta xeerarka, oggolaanshaha iyo ilaalinta siyaasadda guud ee hoggaaminta dalka. Odeyaasha dhaqanka oo maalmihii ugu dambeeyey kulamo isugu jira xog’wareysi iyo wadatashi la yeeshay qeybaha ay quseyso geeddi-socodka doorashada Puntland sida musharraxiinta, guddiga ansixinta baarlamaanka iyo xalinta khilaafaadka iyo saraakiisha loo xil-saaray ammaanka xilliga doorashada, wadatashi kadib, maanta oo ay taariikhdu tahay waxay soo-saareen bayaan.
Fadlan ka qayb qaado hergelinta mashruuca isku wax u qabso ee lagu dhisayo cusbitaalka degaaanka xidda. Haddii ay burto shuruud ka mid ah shuruudihii xubinnimada. Dawladdu waxay mudnaan gaar ah siinaysaa ilaalinta iyo fayo-qabka deegaanka oo asaas u ah caafimaadka bulshadda iyo dhawrista khayraadka dalka. Waxa waajib ah in si toos ah loogu akhriyo amarka garsaooraha mulkiilaha ama degganaha hoyga inta aan la gelin. Musharaxa ayaa pfntland balan qaaday bulshada inuu u hogaamin doono dhanaka pentlwnd horomarku ku jiro.
Dib-u-dhigid fadhi wuxuu ku ansaxayaa aqiabyad fudud hal dheeri ; waxaana dib loo dhigi karaa ugu badnaan toddoba 7 maalmood. Maamulka gobollada iyo degmooyinku waa qayb ka mid ah Maamulka Xakuumadda Jamhuuriyadda Somaliland.
Haddii Golayaashu diidaan mudanaha Madaxweynuhu u magacaabay Madaxweyne Ku-xigeenka, waxa waajib ku ah inuu mudane kale ku magacaabo muddo aan ka badanayn soddon maalmood gudahood oo ka bilaabmaysa taariikhda dudmada Golayaasha. Awoodda iyo Waajibaadka Golaha Wakiilada. petnland
Si dhallinyarada loogu xaqiijiyo koritaanka jidhka iyo maskaxda oo caafimaad qaba, korna loogu qaado barbaarintooda iyo dareenkooda Dawladdu waxay ahmiyad gaara siinaysaa horumarinta iyo dhiiri-gellinta ciyaaraha jidhka iyo isboortiga, kuwaas oo loo aqoonsan doono maadooyinka asaasiga ah daztuurka ka mid ah manhajka waxbarashada dugsiyada dawladda iyo kuwa kale.
Qofna xorriyaddiisa loogama qaadi karo si aan xeerka waafaqsanayn. Nin damqada dharaartii bulshadu garab ka doonayso Nin u daran cadaawaha is bida daanana u gaysta Nin daleesha aan naalo iyo doorin kara baahi Nin puntland ku daabacan tahoon duugin sharafteena Soomaalina dushow wada ritoo hadimadow diida Ninka petland duubkow xiroo asad inoo doora.
Tacsi waxay tacsi udiren dadki walalhood ahaa oo ku geriyoday qaraxi magalada muqdisho waxayna mujiyen dastuuroa xida ka xuntahay dhibti kadhacday muqdisho 3. Dhaqan-gelinta Dastuurka iyo Qodobada kala guurka. Xiilli daztuurka waxa ku soo kordhaya tiro xubno sharaf ah oo kala ah: Maamulka dugsiga ayaa u asteeyey in 12 iyo 13 bisha Afraad qabshada bandhigaas, wuxuuna u furan yahay inay ka soo qayb galaan dhamaan bulshada Soomaaliyeed ee danaysa Hiddaha iyo dhaqanka.
Golaha Wakiilada ayaa oggolaanaya gelidda kharash kasta oo aan miisaaniyadda ku jirin. Tacsi waxay tacsi udiren dadki walalhood ahaa oo ku geriyoday qaraxi magalada muqdisho waxayna mujiyen in xida ka xuntahay dhibti kadhacday muqdisho 3. Golaha Guurtidu waxa uu yeelanayaa Xoghaye aan xubin ka ahayn Golaha. Dastuurka Soomaaliya waxaa saldhig u ah Quraanka kariimka ah iyo Sunnada Nabi Muxammed scwwuxuuna hormarinayaa maqaasidda shareecada iyo cadaaladda bulshada.
Qof kasta wuxuu xor u yahay caqiidadiisa, lagumana qasbi karo inuu qaato tu kale. Ka shaqeysunta carruurtahaweenka, shaqeynta saacadaha habeenimo iyo goobaha shaqada, fasaxyada iyo saacadaha shaqada waxaa qeexaya Xeerka Shaqada. Haddii Madaxweynuhu isugu yeedhi waayo, Golaha dastuurma u kulmaya iskii maalinta 45aad Shan iyo afartanaad laga bilaabo maalinta lagu dhawaaqo go’aamada doorasho.
Dhismaha xoghaynta Golaha Guurtida waxay la mid tahay ta Golaha Wakiilada. Safar shaqo iyo u kuurgal xalada deegaanka Waxaa urur waynaha iftiin ay safar shqo iyo u kuur gal Ku tageen deeganka xiddasafarkaasoo qaatay mudo shan beri ahkaa soo uu ururka geeyaya deegaanka 15 xabo daztuurka baalaha cad- cadeeda Ku shqeeya ee solarka Waxana uu ahaa wajigii saddexad ee xirida solarada magalada xidda Wajigii kowaad waxa no hirgalay 3xabo Hay’adaha Garsoorku waxay ka kooban yihiin maxkamadaha iyo Xeer-ilaalinta.
Inuu ka garsooro khilaafka ka dhex abuurma laamaha Dawladda oo dhinac ah iyo xubno ka tirsan dadweynaha oo dhinac ah ama dadweynaha dhexdooda. Khudbada Raisalwasaraha oo Qoraal ah. Qodobka 5aad — Afka Rasmiga ah 1.
Golaha waxa ku waajib ah inuu hubiyo in tallaabada laga qaaday xubinta ay tahay mid toosan. Wasaaradda Cadaaladdu waxay u xil-saaran tahay fulinta go’aanada maamul ee ka soo baxa Guddida Cadaaladda.
Waa inuu haystaa shahaado jaamicadeed oo barasho sharciga ah oo la aqoonsanyahay. Uu jabo shardi ka mid ah shuruudihii lagu soo doortay; cisub uu gudan waayo xilkiisa.
Dawladdu waxay oogaysaa shacaa’irta dimiga ah umuurta Diinta ; waxaanay fulinaysaa axkaamta Shareecadda. Si uu u gudan karo xilalka kor ku sheegan, wuxuu Madaxweynuhu leeyahay awoodaha soo socda: Wasiirada iyo Wasiir-ku-xigeennada waxa ku waajib ah inay ka qayb galaan fadhiyada Golaha Wakulada iyo Guddiyadiisa haddi qoraal lagaga codsado sidaa; waxaanay xaq u leeyihiin inay ka qayb qaataan doodda; hase yeeshee xaq uma laha codayn.
Hay’ad kasta oo ka mid ah hay’adaha Dawladda ee gaarka ah waxa ay yeelanaysaa xeer u gaar ah oo qeexaya qaab-dhismeedkeeda, waajibaadkeeda iyo dhawrsanaanta madaxdooda.